Category Italy – Cayaaraha dunida
Juventus oo qaaday Horyaalkii 6 aad ee Seria A oo Xiriir ah + Sawiro.
May 22 2017 Kooxda kubada Cagta Juventus ayaa Galabta qaaday Horyaalkii 6 aad ee Xiriir ah kadib markii ay 3-0 kaga badiyeen Naadiga Crotone, Juventus ayaa Waxaa Goolasha u kala dhaliyey Xidigaha ah kala ah Paulo Dybala, Mario Mandzukic iyo alex Sandro Waxaana ay siweyn ugu Farxeen Taageerayaasha kooxdaas Guushii muhiimka ahayd ee ay ku qaadeen Horyaalkii More...
Carlos Tevez Muxuu Ka Yiri Wararka La Xiriirinaya Inuu Dib Ugu Laabanayo Kooxdiisii Hore Boca Junior?
23 04 2015 Mudooyinkii lasoo dhaafay hadal heynta ugu badan ee ka jirta maagalada Turin ayaa aheyd in Carlos Tevez uu dib ugu laabanayo kooda Boca Junior oo uu kasoo mid waayahiisii hore kubada cagta marka uu dhamaado More...
Wakiilka Pogba Oo Ka Dhawaajiyay In Xidigan Xagaagan Ay Kooxdiisa Juve Iibin Doonto
23 04 2015 Wakiilka misaanka culus Mino Raiola ayaa sheegay in macmiilkiisa Paul Pogba uu xagaagan kooxdiisa Juventus isaga hayaami doono. Mino Raiola ayaa ka dhawaajiyay in kooxo badan ay laacibka reer France ku More...
AC Milan oo weydiineysa Chelsea in Marco van Ginkel sanad kale uu la sii joogo.
22 04 2015 AC Milan ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka Marco van Ginkel waxaana ay doonayaan iney heshiiska amaahda u kordhiyaan xiddiga qadka dhexe oo ay milkiyadiisa leedahay Chelsea. 22 jirkan ayaa San Siro ku More...